Global Voices teny Malagasy » Nody Niaraka Tamin’ny Praiminisitra Lefitra Rosiana Tokoa Ve Ilay Alika Nijaly Natao Andrana Ara-tsiansa? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Janoary 2018 15:26 GMT 1	 · Mpanoratra Christopher Moldes Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Politika, Siansa, Teknolojia, Akon'ny RuNet
Zon'ny mpamorona: Max Pixel // Azon'ny rehetra ampiasaina
Ao anatin'ny lahatsary etsy ambany, izay mety hanelingelina ny mpijery sasany, misy lehilahy iray manao fitafy laboratoara mihazona alika fohy tongotra “teckel” mainty sy beizy eo an-tsandriny. Manazava ny lehilahy iray hafa manao akanjo ambony ambany sy kravaty hoe:
Mampiasa rano nofenoina oksizena be izahay. Atsofotsika ao anatin'ny ranom-panandramana ity biby ity.
Ary amin'izany, ny lohan'ilay alika no nalefa voalohany tao anatin'ilay siny nofenoina rano ary navela nijanona tao nandritra ny iray minitra eo ho eo, ka nikofokofoka aoka izany.
Izany rehetra izany dia tao anatin'ny hetsika natao tamin'ny faran'ny volana Desambra 2017 noho ny fitsidihan'ny filoha Serba , Aleksandar Vučić, avy amin'ny praiminisitra lefitra Rosiana sady lehiben'ny indostrian'ny fiarovana, Dmitry Rogozin.
Ny tanjon'izy ireo dia ny hampiseho fivoarana farany amin'ny “fifohana ranoka”, izay nampisehoana ranoka nofenoina rivotra ahafahan'ireo tafalentika (an-tsitrapo na hafa) mba hifoka sy hahazo rivotra araka ny tokony ho izy.
Nesorina tao anatin'ilay rano azo fohana ihany ilay alika nony farany ary notazonina mitsangana avy eo, nihetsiketsika sy nikohakohaka, ary hita nivoaka tamin'ny orony sy ny vavany ny rano (jereo ny horonan-tsary etsy ambony fa voinanao raha tsy zakanao ny sary).
Niteraka fahatezerana teo amin'ireo mpaneho hevitra Rosiana sy iraisam-pirenena avy hatrany ilay lahatsary, miaraka amin'i Alexey Navalny be fanantenana ho filoham-pirenena, naneho ny heviny tamin'ny fandaharany mivantana isan-kerinandro. 
Mety ho nihevitra toy izao ilay alika mampalahelo hoe: Jesoa Kristy, inona ity, nipetraka teo an-tsandrin'ny olona teo anoloan'ny olobe sasantsasany fotsiny aho, ary tampoka teo, nalenti-dry zareo aho, miezaka mamono ahy ireo olona ireo, ho faty aho. Noho izany, vonona ho faty ity alika, nanomboka nifoka ity rivotra ity, na ity rano ity izy. Saingy nanan-karena oksizena ny rano, ka tsy maty ilay alika, navoakan'izy ireo izy ary nanomboka namoaka izany rano izany teo anoloan'ny rehetra … Eny, mazava ho azy fa tsy mpihatsaravelatsihy isika, mahafantatra fa misy ny fanandramana sasany ilàna biby. Saingy tsy mampiasa alika ho biby fanandramana ry zareo! Misy biby sasantsasany ampiasainao amin'izany – voalavo, ohatra. Raha niomana tamin'ity fampisehoana ity aho, nanao fikarohana tao amin'ny google aho hoe “andrana atao amin'ny alika (teckel) “, ary namaly ny Google sady nampihorokoditra hoe: “Ny tianao lazaina ve hoe andrana atao amin'ny voalavo?”
“Nandetika alika i Rogozin sy ny namany…..ary mamoaka “alika hafa tsy tena izy” ankehitriny”
Tsy nety naneho hevitra  momba ny raharaha ny dekàn'i Rogozin, praiminisitra lefitra, na dia tsy maintsy mikasika an'i Rogozin tenany mihitsy aza ny resabe, satria tamin'ny alin'ny faran'ny taona hifoha taombaovao, nandefa ny sariny niaraka tamin'ny vadiny, ny alikany, sy ny alika keliny nompiana vao haingana, izay voalaza fa tena mitovy tanteraka tao anatin'ilay lahatsary izy:
Dmitry, Tatyana, Nikolas sy Poncho Rogozin dia miarahaba anao, namana, Tratry ny Taona! Tsy hanaikitra sy hivovò anao anie ny taona 2018, fa mampipelipelika fotsiny ny rambony mampandrisika!
Nikolas no anaran'ilay alika kely natao andrana ary avy eo nompian'i Rogozin. Nanao izay vitany ny fampahalalam-baovaom-panjakana Rosiana mba hanasongadina ny herim-pon'ilay alika, sy ny fahalasamany ary ny fanahiny mivaivay , ary ny fomba nanampiany tamin'ny fandrosoana ara-tsiansa manan-danja toy ny fanatsarana ny fiveloman'ny tantsambo tafahitsoka anaty sambo nilentika an-dranomasina .
Na izany aza, tsy dia nahavita nampangina ireo siosion-dresaka mahakamo ny filazana ho an'ny daholobe voalaza etsy ambony. Mikasika ny fisehoan'ilay alika imasom-bahoaka voalohany avokoa ny resaky ny aterineto Rosiana hatramin'ny nisian'ny fampisehoana mampitaintaina. Raha mijery ity sary ity sy mbola avy amin'ilay lahatsary nalaina nandritra ny andrana, mpisera iray nanatsoaka hevitra fa nijery alika samy hafa tanteraka isika:
Nandetika alika i Rogozin sy ny namany, nahita alika samihafa, ary ankehitriny mamoaka alika hafa tsy tena izy. Maty ilay tena izy.
Ilay sioka, izay niparitaka haingana, dia mety avy amin'ny fanamarihana tamin'ny Andron'ny Taombaovao natao n'i Anton Krasovsky, mpanao gazety Rosiana ao amin'ny Akon'i Moskoa, radion'ny mpanohitra:
Nandeha ny fotoana, maty ilay alika efatra andro taorian'ny nandetehan'i Rogozin azy, Rogozin dia manana diplaoma momba ny asa fanaovan-gazety izay hita ankehitriny fa mitantana ny indostrian'ny fiarovana ao Rosia.
Velona ve ilay alika?
Mpisera Twitter hafa nanandrana nanazava ny mety ho antony nahafatesan'ilay alika tamin'ny fomba siantifika kokoa:
Mampalahelo, fa efa maty ilay alika tany am-boalohany. Mamokatra oedema an'havokavoka ny biby mampinono mandritra ny 6-8 ora aorian'ny fifohana fluorocarbons [rano nofenoina oksizena]. Izany indrindra no antony nitsaharan'ireo tetikasa fikarohana ireo.
TJournal, tranonkalam-baovao Rosiana, nanao  fanadihadiana manokana ary nanatsoaka hevitra fa, raha ny sary faharoa taorian'ny andrana no jerena, dia toa mitovy tanteraka amin'ilay alika mihitsy, izay toa velona sy mahazo aina tsara eo an-tsandrin'i Rogozin.
Raha tezitra tamin'ilay lahatsary ianao, dia mahereza. Na nompian'i Rogozin tokoa ilay alika na tsia, dia toa nahazo ny valisoany izy. Tany am-piandohan'ny volana Desambra 2017, talohan'ny fampisehoana andrana rano azo fohana, nandefa balafomanga (saingy efa voasaringotra sahady tamin'ny resaben- kolikoly maro) avy teo amin'ny Cosmodrome Vostochny, seranan'habakabaka ao amin'ny Farany Atsinanana ao amin'ny firenena i Rosia.
Ao anatin'ny asany amin'ny maha filohan'ny indostrian'ny fiarovana azy, tompon'andraikitra amin'ny fandaharan'asa an-habakabaka ao Rosia tokoa i Rogozin. Indrisy fa ho azy sy ny tetikasa iandraketany, mampiditra singa [fangitra] diso ireo programeran'olombelona, ary taorian'ny fandefasana nahomby teny an-habakabaka, dia very fifandraisana  tamin'ny zanabolana izay tao anatin'ny balafomanga ry zareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/15/113292/
 hetsika natao tamin'ny faran'ny volana Desambra 2017 noho ny fitsidihan'ny filoha Serba: https://www.rt.com/news/413803-liquid-breathing-dog-experiment/
 naneho ny heviny tamin'ny fandaharany mivantana isan-kerinandro.: https://www.youtube.com/watch?v=55QmsVDKD0E
 Tsy nety naneho hevitra: https://www.5-tv.ru/news/173508/
 31 декабря 2017 г.: https://twitter.com/Rogozin/status/947340106427453440?ref_src=twsrc%5Etfw
 fahalasamany ary ny fanahiny mivaivay: https://www.5-tv.ru/news/173617/
 2 января 2018 г.: https://twitter.com/Rigsector/status/948338390080131072?ref_src=twsrc%5Etfw
 2 января 2018 г.: https://twitter.com/Dor_Perforator/status/948108878679506945?ref_src=twsrc%5Etfw
 very fifandraisana: https://www.sciencealert.com/45m-russian-satellite-lost-after-scientists-admit-they-gave-it-the-wrong-coordinates-roscosmos-meteor